Fedora 18 ကိုသွင်းပြီးတဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲ။ | Linux မှ
ချစ်တယ် | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ
သင်တို့အချို့သိကြသည့်အတိုင်းငါသည်သုံးစွဲသူတစ် ဦး ဖြစ်သည် debian, CentOS ရံဖန်ရံခါမှ တော့ openSUSE။ ငါသုံးပြီးကတည်းကယခု CentOS ငါအချို့သည်ဤမျှပြင်းထန်သောဝေဖန်မှုကိုကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးအခြားသူများကအလွန်တန်ဖိုးထားသည် Fedora 18 ၎င်း၏အဓိက Gnome ဗားရှင်းအတွက် :) ။
အဘယ်ကြောင့် Fedora 18?
ကောင်းပြီအဖြေကအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ် .. CentOS က RHEL ရဲ့ binary clone ဖြစ်ပြီး Fedora က RHEL ရဲ့စမ်းသပ်ရာနေရာဖြစ်တယ်။ တကယ်တည်ငြိမ်မြန်ဆန် နှင့် .rpm packages များအသုံးပြုသည်။ အချို့သည်အဘယ်ကြောင့်ကျေနပ်မှုမရှိကြ၊
ဒါကြောင့်ငါကငါ့ install လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ် Fedora နှင့်လုပ်လိုသူတိုင်းသင်ပေး အကောင်းဆုံး Fedora configuration ကို CentOS မှာရရှိခဲ့တဲ့ဗဟုသုတကိုအခြေခံပြီးအဲဒါဟာအကျိုးဆက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်၏စနစ်သည်ပြproblemsနာများ (သို့) အမှားအယွင်းများမရှိဘဲအလွန်တည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ အမှန်တရားမှာအနာဂတ် RHEL7သည်ဤ Fedora ဗားရှင်းပေါ်တွင်အခြေခံရမည်။ ။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည် Linus Torvalds သည် Shell နှင့်အတူ Gnome သို့ပြန်သွားခဲ့သည်ဟု Gnome မှယောက်ျားများသည်သူတို့၏ Shell 3.6.x နှင့်အတူဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာပြန်ပြောပြသည်။ သင့်အားအသိပေးသည်။ :
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ ငါဟာ Gnome-shell ဆန့်ကျင်သူတစ်ယောက်ပါ။ အခု Fedora 3.6 မှာ version 18.x ကိုတွေ့တော့အဲဒါကိုကျွန်တော်အရမ်းအံ့သြမိပါတယ်။ ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းပြီး Gnome2ကိုကြိုက်တဲ့သူတိုင်းကိုစမ်းကြည့်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။
အလွန်ရှင်းလင်းသောအချက်မှာကျွန်ုပ်၏ဆာဗာများပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်သည် Debian နှင့် CentOS ကိုလိုက်မည်ဖြစ်ပြီး Desktop ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်ခံထိုက်သောစမ်းသပ်မှုအားလုံးပြီးသည်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် Fedora ၌သာနေလိမ့်မည်။ 🙂
Terminal ကိုဖွင့်ပြီး root အဖြစ် log in လုပ်ပါ။
သင်၏ root password
java ကိုပုံမှန်အားဖြင့် install လုပ်ပြီးကတည်းက flash ကို install လုပ်မည်။
Flash အတွက် Adobe Flash စာမျက်နှာသို့သွားပြီး Linux အတွက် YUM version ကိုရွေးပါ။ ကျနော်တို့ဖွင့်လှစ်နှင့်အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်နှင့်သူကအလိုအလျှောက် install လုပ်လိမ့်မည်။
repository ကိုထည့်ပြီးတာနဲ့ငါတို့က program တွေထည့် / ဖယ်မယ်၊ flash ကိုရှာပြီး Adobe flash ကိုမှတ်ပါ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ ATRPMS repository ကိုပေါင်းထည့်ရမည်။
အခုဆိုရင်ငါတို့ system ၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန် repositories အတွက် ဦး စားပေး driver တစ်ခုထည့်သွင်းတော့မည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အထုပ်ရှိသေး၏ yum-plugin- ဦး စားပေး (သူတို့သည်ထည့်သွင်း / ဖယ်ထုတ်ခြင်းပရိုဂရမ်စင်တာမှတပ်ဆင်ပါ) ။
ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် .repo ကိုသာပြုပြင်ရမည် /etc/yum.repos.d/ နှင့် ဦး စားပေးများကိုချိန်ညှိသည်။ n သည် ၁ မှ ၉ သို့ ဦး စားပေးဖြစ်သည်
RPMFusion နှင့် atrpms ကဲ့သို့သောအခြား Repos များ ... ဦး စားပေး = 10
ဒီစနစ်ဖြင့်ငါတို့ system ကိုအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။
Dropbox ကိုတပ်ဆင်လိုသူများအတွက်ဤ link တွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ gnome-shell ၌အသုံးပြုသောအကြောင်းအရာကိုလိုချင်သူများသည်Týrနှင့် Faience icon များဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုသင်ကူးယူနိုင်သည်။
ပြီးတော့သူတို့မှာ blog.desdelinux.net မှသူငယ်ချင်းများရှိပြီးဖြစ်သည်
ဤ Fedora 18 ဗားရှင်းကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပြီးမှတ်ချက်ပေးရန်မမေ့ပါနှင့်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Fedora 18 ကိုသွင်းပြီးတဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲ။
Fedora ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း ?????? UNINSTALLLOOOOOOOO 🙂
ငါအိမ်မှာသုံးပြီး GNU / Linux စနစ်နဲ့နှစ်အတော်ကြာမနေခဲ့ဘူးလို့ယုံကြည်တယ်။ ငါ KDE နှင့်အတူဗားရှင်းကိုအသုံးပြုကြောင်းရှင်းလင်း။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုမှတ်ချက် Shitdora ရရှိခဲ့သည်
ငါကဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာသိရင်အရင်စမ်းကြည့်သင့်တယ်ထင်တယ်။ ငါ linux မှာနာမည်ကြီးတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအလုပ်လုပ်တဲ့ Fedora, Ubuntu, LMDE, ငါ Fedora နဲ့ကပ်နေတယ်။
Ah .... ဒီသူငယ်ချင်းနဲ့ကူညီပါ။ http://blog.soporteti.net/…။ ဒါငါမြင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ
Windows အကြောင်းဗားရှင်းအားလုံးမှာသိချင်၊ သိချင်သမျှ
သင်မှန်ပါတယ်၊ Fedora 18 ဟာအများဆုံးချို့တဲ့မှုပါ။ Red Hat ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကနာမည်ကြီးတွေတောင်အဲဒါကိုအဆိုးရွားဆုံးပုံစံအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့တယ်။
စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတယ်၊ အခုငါ Fedora 17 ကိုပြန်လာပြီ။ ဒါကအများကြီးပိုကောင်းတယ်။
စကားမစပ်, ATRPMS repo ကိုသတိထားပါ၊ Fedora system နှင့်ပြသနာများကြောင့်လူသိများတာပါ၊ အကယ်၍ ပျော်ရွှင်သောစာကြည့်တိုက်ကိုသင်လိုအပ်လျှင် rpmfusio နှင့် livna တို့နှင့်သာနေသင့်သည်။
ထို့ကြောင့် repos ၏မကောင်းသောလိပ်များကိုရှောင်ရှား။ စနစ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းသိမ်းရန် tutorial (yum-plugin-Priority) တွင် ဦး စားပေး package ကိုပေးသည်။ 🙂
rpmfusion (၎င်းသည် distro ဖိုင်များဘယ်တော့မှအစားထိုး) မတူဘဲ၎င်းသည် distro ဖိုင်များကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်ပြုပြင်သည်။ အချို့သောပရိုဂရမ်များ / packages များအတွက်လိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်မည်မျှအထိစိတ်ချရသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ငါမဟုတ်ဘဲ၎င်း၏ ATPPM အပေါ်မှီခိုမှုတောင်းလျှင်၎င်းသည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းကတည်းကကြောင်းလမ်းကျနော်တို့က distro ၏ဘာမှပြုပြင်မထားဘူးသေချာအောင်၎င်း၏လမ်း ((ဒါလုပ်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်) က၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ package ကို download လုပ်ပါကိုရှေးခယျြမယ်လို့ကစနစ်နှောင့်အယှက်မည်မဟုတ် မ rpmfusion (၎င်းသည်ဒီတစ်ခုနှင့်လည်းဆန့်ကျင်သည်) သို့မဟုတ်။
ယေဘူယျထောက်ခံချက် (သင် Fedora ဖိုရမ်၌ပင်မြင်နိုင်သည်) သည် rpmfusion ကိုသင်အသုံးပြုပါက ATRPMS ကိုမသုံးပါနှင့်။
ဒီ repo ကိုကျွန်တော်သေချာမသုံးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကသူကကျွန်တော့်ကိုခေါင်းကိုက်စေခဲ့တယ်။ ထုပ်ပိုးမှု မှလွဲ၍ rpmfusion နဲ့အတူတူပဲ။
Fedora မှာ gnome shell ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းချင်တဲ့အကြောင်းတွေပိုများလာတယ်။ Ubuntu မှာ ppa လိုမျိုးမရှိဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင့်ကို icon တွေ၊ themes တွေတပ်ဆင်ခွင့်ပေးတယ်။ မကြာခင်ဖြစ်နိုင်လားကြည့်ရအောင်။
ငါ gnome 3.8 ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ၎င်းသည်ယနေ့အထိ gnome ၏အကောင်းဆုံးဗားရှင်းဖြစ်လိမ့်မည်
Fedora ဟာအလွန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်အဲဒါကိုမသုံးဘူးဆိုရင်အဲဒါကိုရွှေ့ဖို့ကြိုးစားတယ်၊ disk ထဲမှာ I / O အမှားတစ်ခုရှိနေလို့ပါ။ အပြင်ငါ Debian ၏သက်တောင့်သက်သာဖို့လေ့ရှိတယ်။
ဆော့ (ဖ်) ဝဲအသစ်ကိုစမ်းသပ်ရန်၎င်းကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်စဉ်းစားနေခဲ့သော်လည်း Arch ထံမှဖတ်နေပြီး Debian နှင့် တွဲဖက်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။
Fedora ကဖြန့်ဖြူးတာကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာလို့ငါ့ကိုမအောင်မြင်ရတာလဲဆိုတာကိုငါမသိဘူး။ gnome shell နဲ့အတူအရာအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ဖို့ပိုပြီးအာရုံစိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ရမယ်။ ငါက openuse ကို kde နဲ့ပိုသဘောကျတယ်၊ ပိုပြီးလွယ်ကူပြီးပိုပြီးအစွမ်းထက်တယ်။ ။
ဒါကကြီးစွာသော distro င်, ဒါပေမယ့်ငါကမသုံးကြဘူး။
ကျွန်တော့်အတွက် (၆ လမှ ၈ လအတွင်းသာထောက်ခံမှုသံသရာ (အမှားမမှန်ဘူးဆိုရင်) ကြီးလေးတဲ့အမှားတစ်ခုလို့ထင်ရတယ်။
အကယ်၍ LTS တစ်ခုရှိခဲ့ရင်တခြားအရာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။
ကောင်းပြီ RHEL7နှင့် CentOS7သည် Fedora 18 ကိုအခြေခံလိမ့်မည်။ သင်သည် CentOS မှ ၁၀ နှစ်ပံ့ပိုးမှုရလိမ့်မည်။ မဖြစ်နိုင်တာထက် LTS ပိုများတယ်🙂
ဤတွင် RPMFusion repositories ထည့်ရန်သင်ခန်းစာဖြစ်သည်။ http://mundillolinux.blogspot.com/2013/03/que-hacer-despues-de-instalar-fedora-18.html
အဆိုပါ RPMFusion ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသည် :) ။ သူတို့ကပြproblemနာမရှိဘဲထည့်သွင်း။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၏ Fedora ဗားရှင်းအတွက် RPMfusion ကိုတစ်ကြိမ်ထက်မကကူးယူပြီးကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်၎င်းတို့ကိုသင်ဖော်ပြသည့်အတိုင်းထည့် သွင်း၍ မရပါ၊ console မှသာလျှင်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါမည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင့်ရဲ့ post ကိုသုံးပါ
console ကိုဖွင့်ခြင်း၊ root လုပ်ခြင်းနှင့် log in လုပ်ခြင်းကဲ့သို့ဘာမှမရှိဘူး။
yum package_name_or_repository.rpm install လုပ်ပါ
Fedora မှာတစ်ခါတစ်ရံလိုမျိုးသင်တိုက်ရိုက် run လို့မရတဲ့ rpm တွေတပ်ဆင်ခြင်းသည်ဤနည်းဖြစ်သည်။
Terminal သည်အကောင်းဆုံး linux tool ဖြစ်သည်
သင် "localinstall" with ဖြင့်လည်းလုပ်နိုင်သည်
Fedora 18 ကထွက်လာပြီ။ ငါက gnome-shell နဲ့ထည့်လိုက်တယ်။ အမှန်တရားကငါ့ကိုအရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ desktop ကိုသုံးတယ်၊ extension တွေ၊ themes တွေ၊ မပျောက်ကွယ်နိုင်တဲ့အရာတော်တော်များများလိုအပ်တယ်။ ငါက၎င်း၏အငြင်းပွားဖွယ် installer ကိုကြောင့်မ uninstall လုပ်ခဲ့တယ်, ငါ Fedora 18 Xfce 4.10, တကယ့် desktop ပေါ်မှာဖြစ်ပြီး, အလွန်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ မင်္ဂလာပါ
မင်္ဂလာပါ Ferran :),
ငါ repos တွင်ပါဝင်သည်နှင့် gnome-tweak-tool ကိုအထုပ်နှင့်အတူအလိုအလျှောက် install လုပ်သော gnome-shell ကိုများအတွက် extension တစ်ခုတည်းအဘို့အအခြေချခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာ gnome-shell-extension-user-themes ကိုဖြစ်ပြီးငါအလွန်စိတ်မကောင်းပါဘူး ငါ Gnome-shell 3.6.2 ကိုအရမ်း ၀ မ်းသာပါတယ်။ ကျွန်တော်အရမ်းဝမ်းသာမိပြီး Gnome-shell ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာငါ xfce ကိုပြောင်းလိုက်တယ် :) .. အခုငါပြန်လာပြီး Linus Torvalds လည်းအလားတူမတူကွဲပြားမှုကိုလုပ်ဆောင်နေပုံရတယ်
Linus Torvalds ၎င်းသည်စားပွဲခုံအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်လျှောက်ရန်အကောင်းဆုံးဥပမာမဟုတ်ပါ။ သူပြောသောအရာသည်ကောင်းသည်၊ မကောင်းသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလွန်နည်းသည်။ ကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြောသနည်း။ ကောင်းပြီ၊ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာက
ငါတကယ် web browser (အီးမေးလ်များအတွက်သာမကအပြင်ဆွဲရန်) နှင့်ငါ git ကိုသုံးသောဆိပ်ကမ်းများသာသုံးသည်။ တခါတလေ git သမိုင်းကိုကြည့်ဖို့ gitk window ကိုသုံးတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အချိန်အများစုသည်အီးမေးလ်များကိုဖတ်ရှုခြင်း (တုံ့ပြန်ခြင်း)၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်အမျိုးမျိုးကိုပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ရလဒ်များကိုစစ်ဆေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ငါသုံးသောအခြားကိရိယာတစ်ခုမှာ“ perf” ဖြစ်သည်။ ငါ (ငါအဓိကအားဖြင့် kernel နှင့်အခြား git အလုပ်များကိုပြုစုသော) အတွက်ငါကိုင်တွယ်သော payload များအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်သော tool တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်သူသည်လက်ရှိ Desktop Environments ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအထူးအသုံးချသူမဟုတ်ပါ။ 😉
ငါအမှန်အကန်ပြောနေတာလား Linus အသုံးပြုတဲ့ desktop ကိုငါဂရုမစိုက်ဘူး Fedora 18 မှာ Gnome ကိုသုံးတဲ့အခါငါအံ့သြစရာကောင်းတာကငါဟာ gnome-shell ဖြစ်တယ်။ gnome-shell ပေါ်လာပြီးကတည်းကငါ Xfce (သို့) KDE ကိုသုံးပြီး gnome-shell ကငါ့အတွက်အရမ်းဆိုးနေပုံရတယ်။ ဗားရှင်း ၃.၄.x နှင့်အတူအရာအားလုံးတိုးတက်လာသော်လည်းကျွန်ုပ်မကျေနပ်သေးပါ။ သို့သော် gnome-shell 3.4.x သည်တော်လှန်ရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သိရတာဝမ်းသာပါတယ်။ အကယ်၍ Linus ကသူ့ကိုယ်သူတံတားပေါ်ကနေလွှင့်ပစ်လိုက်ရင်သူတို့လည်းအတူတူပါပဲ။ အများကြီးရှိတယ်။ ငါထင်မြင်ချက်ကိုပြောချင်တာက Linus ဟာစားပွဲခုံကိုထောက်ခံရန်အကောင်းဆုံးသူမဟုတ်ပါ။ ။ 😀
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့် အချိန်မှစ၍ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစောင့်ဆိုင်းရသောအချိန်ကုန်လွန်သွားသောအခါယနေ့ကျွန်ုပ်သည် Fedup (ယခု Anaconda အသစ်ကိုလုံးဝမုန်းသည်) နှင့် update လုပ်ခဲ့သည်။ Fedora + KDE ကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခု။ Fedora 18 သည် DE 1000 ဖြစ်သင့်သည်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည်။
အဲဒီမှာသူတို့ဟာမသိဘဲစကားပြောနေကြတယ်။ သူတို့ထွက်သွားပြီးနောက်တစ်လ၊ နှစ်လလောက်တောင်မစောင့်ဘဲ Fedora ဗားရှင်းအသစ်ကိုဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာမထားသင့်ပါဘူး။
@petercheco RPM လိုဘာမှမရှိဘူး။
ကံကောင်းတာက Juan Carlos :) ။ ငါ Fedorians ဘယ်မှာစဉ်းစားခဲ့ကြ: D.
ငါအရမ်းဝမ်းသာတယ်။ ငါပြောပြီးပြီ။ CentOS7သည်ကျွန်ုပ်၏ဆာဗာများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ Fedora တွင်ရှိနေသော Desktop နှင့် Laptop များအတွက်စိတ်မရှည်စရာမလိုပါ😀😀
ကျွန်ုပ်သည်ပြsomeနာအချို့ကိုအကြိမ်မည်မျှငြင်းပယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဘာမျှမရှိပါ၊ linux ၌ကျွန်ုပ်နှစ်ခြင်းခံသည့် distro သို့အစဉ်ပြန်သွားပါသည်။ Centos ကကျွန်တော့်ကို Fedora ထက်ပိုပြီးလက်ခံသည်မဟုတ်ပါ
ကျွန်ုပ်၏ Centos 6.4 ကို Fedora 18 အတွက် update လုပ်ရန်စဉ်းစားခဲ့သည်။ သို့သော် Anaconda အသစ်ကကျွန်ုပ်ကိုမယုံကြည်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Fedora 18 ကို ၅ ကြိမ်ကဲ့သို့ (ကွဲပြားခြားနားသော PC များ၌) တပ်ဆင်ထားသည်ကိုတွေ့မြင်ရပါသည်။
ငါ Fedup ကိုပေါ်လာကတည်းကသိပါပြီ၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တစ်ခါမှမသုံးဖူးဘူး၊ Fedora မှာအမြဲတမ်းပြောတာက install လုပ်ဖို့ပိုကောင်းတယ်၊ ဒါကကျနော့်အမြင်ပါ။ ။
ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ တိုင်ကြားရန်ဘာမှမရှိ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွင်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိချေ။
1) yum fedup install လုပ်ပါ။
၂) Fedup -y && fedup-cli –network2ကို install yum ကိုထည့်ပါ။ -debuglog fedupdebug.log
၃) သည်းခံခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ အနည်းငယ်ပိုပြီးစိတ်ရှည်သည်းခံခြင်း၊ နည်းနည်းပိုသောအရာများ (download လုပ်ထားသော package ၁၀၀၀ ကျော်ရှိသည်) ။
yum distro-sync && yum update -y && yum သည် rpmconf ထည့်သွင်းပါ။ -& & rpmconf -a
(၅) အဖွဲ့နှင့်အဆင်ပြေရန်၊ အလုပ်လုပ်ရန်၊ ပျော်မွေ့ရန် (သို့) သင်လုပ်သမျှ။
ကျွန်ုပ်ထပ်ထည့်သည်၊ ၎င်းကိုသူတို့ download လုပ်ထားသော .iso ပုံမှလည်းလုပ်နိုင်သည်။ အဆင့် ၂ ကိုသာပြောင်းပါ။
Fedup ကို install သွင်းပါ။ -y ​​&& fedup-cli –iso /home/user/fedora-18.iso –debuglog = fedupdebug.log
ငါ fedora ကိုခဏလောက်သုံးဖူးတယ်၊ အထူးသဖြင့်လူအနည်းငယ်သတိထားမိခဲ့တဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ package manager Yum နဲ့ငါအင်တာနက်ပေါ်မှာစာဖတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ Fedup ကိုသုံးဖို့အရမ်းမသင့်တော်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ကိုဗားရှင်း alternating ဗားရှင်း၏ဇိမ်ခံကားကိုပေးစေခြင်းငှါဖြန့်ချိ။ နည်းပညာပိုင်းအရကြည့်လျှင်၎င်းသည်၎င်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင့်အတွက်အကျိုးရှိမည်ဆိုလျှင်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုလက်တွေ့တွင်ဖတ်ပါ။
ငါသိတယ် Fedora 18 မှာသူတို့က system တစ်ခုခုကို folder တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ Fedupup ဒီဟာ fix လား
ဝီဝီ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဝီကီမှာကျွန်တော်မသိတဲ့အရာတွေရှိတယ်။
ထောက်ခံမှုအဆုံးတိုင်အောင် Fedora 17 ။ ထိုအခါငါ Fedora 18 ပြောင်းရွှေ့ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်မှာကျွန်ုပ်၏ PC တွင် Fedora 18 Xfce 4.10 ရှိနေပါပြီ။ ကျွန်တော် FedUp ကိုတစ်ခါမှမသုံးခဲ့ပါ။ ငါအမြဲတမ်းလက်ဖြင့် update ကိုအလုပ်ပွုပါပွီ။ Kde တွင်စနစ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် Sweeper ရှိပြီး Gnome bleachbit နှင့် command line များတွင် Fedora 18 နှင့် Xfce 4.10 တို့တွင်စနစ်ကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်နည်းလမ်းရှိသလား။ မင်္ဂလာပါ
ကောင်းပြီငါ Sweeper နှင့်ပတ်သက်။ သူသည်အဘယ်သူသည်ငါသိ၏။ တကယ်တော့ဒါဟာ KDE application တစ်ခုဖြစ်ပြီး Bleachbit အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဤ application သည် Gnome စီမံကိန်းနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ။ မည်သည့် linux desktop နှင့် Windows အတွက် version မဆို Bleachbit ကိုလုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်ဒီမှာရှာနိုင်သည် http://bleachbit.sourceforge.net/download/linux
ငါ bleachbit ကို download လုပ်ပြီး Xfce4.10 နဲ့ဘယ်လိုပြုမူတယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။ မင်္ဂလာပါ
petercheco သည် rpmfusion သည် atrpms မရှိခြင်းကိုပင်အကြံပြုကြောင်းသတိရပါ၊ သူတို့အကြံပြုသောအချက်များမှာ russianfedora ၏။
ပြီးခဲ့သည့်မှတ်ချက်၌ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့, configured yum-plugin-Priority plugin သည် ဦး စားပေး configuration များအရ install လုပ်ထားသည့် repos မှ package များ update သို့မဟုတ် update ကိုခွင့်မပြုသောကြောင့်သင်၏ system ကိုတည်ငြိမ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ယခုအချိန်တွင် terminal တွင် yum update ကိုလုပ်ဆောင်သည့်အခါဤ plugin (ပို့စ်၏သင်ခန်းစာနှင့်တူသည်ကို configure) က 98 packets ကိုကာကွယ်ထားပြီး Atrpms repos မှ update မည်မဟုတ်ပါ ထပ်မံ၍ ထပ်မံပြောကြားသည်။ yum-plugin-priorities ကို configure လုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည် 100% တည်ငြိမ်သောစနစ်တစ်ခုကိုရရှိသည်။ ဒီ plugin ကို RHEL / CentOS မှာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးပြီးစမ်းသပ်ပြီး၊ ငါဟာ CentOS ဆာဗာတွေမှာပြneverနာမရှိခဲ့ဘူး။ သင်၏ yum-plugin-priority plugin ကိုသင်၏ system ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပြီးတပ်ဆင်ခြင်းမပြုသောအခါတရားဝင် RPMFusion စာမျက်နှာ၏အကြံပြုချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
Fedoriano အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ မင်း Debian use ကိုသုံးသည်ကိုငါတွေ့တယ်
မေးခွန်းတစ်ခုခု - သင်သည် Debian ကို Fedora ကိုပြောင်းပြီးပြီလား livecd တွင် virtualizing သို့မဟုတ် test လုပ်နေသလား။ 😀
ငါသည်သင်တို့ကိုငါအဖြေ, ထို့နောက်ငါဤအချိန် virtualizing သုံးစွဲဤကိစ္စတွင်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ဖြစ်ပျက်သောအရာကိုငါဗားရှင်း 14 ကတည်းက fedorian ခဲ့ကြပြီး, သူတို့ကလအနည်းငယ်အကြာကစမ်းသပ်ခဲ့ကြပြီးယခုငါအခြား distro မှချစ်ခင်ကြင်နာရန်ရှိသည်အဘယ်ကြောင့်, အဘယ်ကြောင့် ငါပြောခဲ့သလိုပဲငါက Fedorian တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Fedora 14 ဟာ Linux or GNU / Linux လောကမှာပထမဆုံး distro ပါ။ အစပျိုးပြissueနာကြောင့် ubuntu * ကိုသုံးဖို့ငါ့မှာတစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးဘူး။ dual- boot ကိုသုံးပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ သူသည်လုပ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်ကို troller ဟုခေါ်သည်။ p သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့နှင့်ကျွန်ုပ်မလိုက်သင့်သောကျွန်ုပ်အမှားမဟုတ်ပါ။
Trah ဟာဟာဟား ...
Elav၊ မင်း Fedora ရဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့ငွေကြေးကိုစစ်ဆေးချင်ပါသလား။
Debian အပြင်ဘက်မှာတစ်ခုခုလုပ်ရင် openSUSE ဖြစ်လိမ့်မယ်။ 😛
စမ်းသပ်မှုများစွာပြီးနောက် openSUSE နှင့် Fedora အကြားမှာကျွန်ုပ်သည် desktop နှင့် laptop PC များနှင့် CentOS နှင့်အတူရှိနေသော server များတွင် Fedora တွင်နေခဲ့သည်။ CentOS နဲ့ Debian တည်ငြိမ်မှုကွာခြားချက်က Fedora နဲ့ Debian testing တို့လိုကွာခြားချက်တစ်ခုလိုပဲငါ့ကိုယုံကြည်နိုင်တယ်။
ကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်လူအများစု၏ထင်မြင်ချက်များကိုသင်နားလည်နိုင်ရန် livecd (သို့) virtual magic ၌ပင်စမ်းကြည့်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ တကယ်တော့ငါကသင့်ကို distro အားလုံးကိုမပြောင်းခိုင်းဘူး။ စွမ်းဆောင်ရည်၊ package အသစ်များ၊ အခြား linux system ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကဲ့သို့သောအခြားသုံးစွဲသူအားအမှန်တကယ်သိရှိစေရန်ကြိုးစားနေခြင်းသာဖြစ်သည်။
တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးတဲ့အခါငါတို့အားလုံး linux တွေပါ
အကယ်၍ သင်က Fedora (သို့မဟုတ် X distro) အသုံးပြုသူမဟုတ်လျှင်ဤလမ်းညွှန်များကိုအလွယ်တကူရနိုင်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် linuxero 🙂ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ့မှာ Fedora 16 နဲ့ 17 ရှိခဲ့ပြီးအဲဒါဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ distro တစ်ခုဖြစ်ပြီးအရမ်းတည်ငြိမ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအမြဲတမ်း Archlinux ကိုပြန်သွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်နည်းနည်းနဲ့၊ ငါဟာ versionitis ခံစားနေရပြီး ၆ လစောင့်စရာမလိုဘဲနောက်ဆုံးပေါ် package တွေအမြဲလိုချင်နေလို့ပါ။
ငါဒီအစွန်းရောက်မသွားနိုင်: D .. ငါဆာဗာများနှင့်စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်နှစ် ဦး စလုံး Debian တွေအများကြီးအသုံးမပြုမီ, ဒါပေမယ့်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်ငါပထမ ဦး ဆုံး CentOS ကို install လုပ်ဖို့စတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်အဆုံး၌ငါလက်တွေ့ကျကျရွှေ့ပြောင်းအဆုံးသတ် (လက်ရှိငါ Debian နှင့်အတူဆာဗာရှိသည်ရှိပြီးသား Wheezy သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် Wheezy နှင့် CentOS နှင့်အတူဆာဗာနှစ်ခု \_ t ကျွန်ုပ်သည် CentOS 6.4 ကိုအသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်၏ဆာဗာများကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် openSUSE နှင့် Fedora တို့ကို desktop / laptop distros များကိုစမ်းသပ်နေစဉ်တွင် rpm packages များနှင့်လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏ server များအားလုံးရွှေ့ပြောင်းခြင်းအဆုံးသတ်တော့မည်ကို CentOS7သို့ပြောကြားပါမည်။
ငါဒီအစွန်းရောက်မသွားနိုင်: D .. ငါဆာဗာများနှင့်စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်နှစ် ဦး စလုံး Debian တွေအများကြီးအသုံးမပြုမီ, ဒါပေမယ့်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်ငါပထမ ဦး ဆုံး CentOS ကို install လုပ်ဖို့စတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်အဆုံး၌ငါလက်တွေ့ကျကျရွှေ့ပြောင်းအဆုံးသတ် (လက်ရှိငါ Debian နှင့်အတူဆာဗာရှိသည်ရှိပြီးသား Wheezy သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် Wheezy နှင့် CentOS နှင့်အတူဆာဗာနှစ်ခု \_ t ကျွန်ုပ်သည် CentOS 6.4 ကိုအသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်၏ဆာဗာများကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် openSUSE နှင့် Fedora တို့ကို desktop / laptop distros များကိုစမ်းသပ်နေစဉ်တွင် rpm packages များနှင့်လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏ server များအားလုံးရွှေ့ပြောင်းခြင်းအဆုံးသတ်တော့မည်ကို CentOS7သို့ပြောကြားပါမည်။ RHEL7ကို Fedora 18, desktop pc နဲ့ laptop တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီး Fedora :) ကိုကပ်ပါလိမ့်မယ်။ RPM တွေကအရမ်းအားကောင်းသွားပြီး RHEL / CentOS / Fedora ကမယုံနိုင်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိတယ်။ Debian တည်ငြိမ် / စမ်းသပ်ခြင်းကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှယနေ့အထိအသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ပြောနိုင်သည်မှာ RHEL / CentOS စွမ်းဆောင်ရည်သည် (၎င်းကိုပြောရန်စိတ်မကောင်းသော်လည်း၎င်းသည်မှန်ကန်သော်လည်း) RHEL / CentOS စွမ်းဆောင်ရည်သည်သာလွန်ကြောင်း Debian က၎င်း၏မူဝါဒကိုအပြောင်းအလဲများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်မဟုတ်ပါ။ သင်ရုံ Debian 2008 နှင့် Debian 6.0.7 စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ရှုရန်။ :( ။ ထို့ကြောင့် RHEL7/ CentOS7ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအတာကြီးမားသောပြောင်းရွှေ့မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ RPMFusion, RPMForge, Epel, NUX CentR / Fedora မှာဆော့ဝဲလ်မရှိလို့ ATRPMS (ဒီနောက်ဆုံး ၂ ခုကနည်းတယ်)
ဤတွင် Yum အသုံးပြုနည်းကိုလေ့လာလိုသူများအတွက်အကြံပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည်
Fedora …ငါ့ကို install လုပ်ဖို့ခေါင်းကိုက်စေတဲ့တစ်ခုတည်းသော distro ။
အကယ်၍ Anaconda installer သည် installation ပြissueနာကိုများစွာရိုးရှင်းစေပါက :) ။ သငျသညျ (သင်သွားတပ်ဆင်နှစ်ခုနှစ်ခုနှင့်အတူသွားကြကုန်အံ့) ရုံအသုံးပြုရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်: D .. သင် Arch ကို install လျှင်သင်ကိုယ်တိုင် orientation မပြုရန်မဖြစ်နိုင်ဘူး ..
ဒီ function ကိုဘယ်လိုခေါ်သလဲမသိဘူး၊ ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲမသိဘူး၊ ၀ င်းဒိုးအသစ်ကိုဖွင့်လိုက်ရင်၊ Desktop အသစ်မှာမင်းကိုထည့်ပေးလိမ့်မယ်၊ mmmm၊ ငါမှာ gnome-tweak-tool ထဲမှာ dynamic desktops ရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုငါ့အတွက်အမြဲတမ်းဖွင့်တယ်၊ အရမ်းအသုံးဝင်တယ်၊ ငါကြိုက်တယ်
Firefox ရှိ Backspace key ဖြင့်“ back” ကိုသွားပါ